Mareynkanka oo soo fara gelinaya Xiisada siyaasadeed ee ka dhaxeysa Kenya & Somalia – War La Helaa Talo La Helaa
Mareynkanka oo soo fara gelinaya Xiisada siyaasadeed ee ka dhaxeysa Kenya & Somalia
Dowladda Mareykanka ayaa sirasmi ah waxaa ay ugu dhawaaqday inay dhex dhexaadineyso dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo xilligaan uu ka dhaxeeyo khilaaf ka dhashay sheegashada Kenya ee qeyb ka mid ah dhul Badeedka dalka Soomaaliya.
Safiirka Mareykanka ee Dalka Kenya Amb, Kyle McCarter ayaa xaqiijiyay in dowladiisu ay wado xilligaan dhex dhexaadinta labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya,isla markaaana uu sheegay in labada dal ay yihiin kuwo aan sina u kala maarmin.
Wareysi uu siiyay Telefishinka Citizen ee Kenya laga laayahay ayaa Amb, Kyle McCarter wax laga weeydiiyay hadii meelo kale lagu xaliyo muranka Badda,sida Maxkamada Cadaaladda Aduunka ee ICJ, isaga oo ku jawaabay
Safiirka Mareykanka ee Dalka Kenya Amb, Kyle McCarter macadeyn in labada dowladooda ay ku qanacsan yihiin dhex dhexaadinta Mareykanka,waxaana horay u jirtay in Madaxda Dowladda Federaalka ay sheegeen in marnaba aysan ogolaan doonin inay Kenya qaadato Taako ka mid ah dhulka Soomaaliya.
Hadalkaan kazso yeeray dowladda Mareykanka ee ku aadan inay dhex dhexaadineyso Soomaaliya iyo Kenya oo uu ka dhaxeeyo muran dhinaca Badda ah ayaa kusoo aadaya xilli shalay Maxkamada Cadaaladda Aduunka ay shaacisay in 9 Bisha September ee sanadkaan 2019 markale dib u bilaaban doonto qaadista Dacwadda Badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
DEG DEG+FIIRSO: Maxaadan Ogeyn oo ka cusub Cadaado,Maxase Dhuusa-mareeb diidan tahay,Xogtii ugu dambeysay Ogow